Ngabe Uyiqapha Kanjani Imidiya Yezokuxhumana? | Martech Zone
Ngabe Uyiqapha Kanjani Imidiya Yezokuxhumana?
NgoMsombuluko, Februwari 21, 2011 NgeSonto, Okthoba 4, 2015 Douglas Karr
Ukuthi uzobamba iqhaza noma cha, kunezizathu eziningana zokuqapha imithombo yezokuxhumana kuyo yonke imikhakha kulezi zinsuku:
Ukuqapha imboni yakho kungakusiza wena nabasebenzi bakho ukuthola ubuchwepheshe.
Ukuqapha izimbangi zakho kungakusiza ekuhlanganiseni ubuhlakani bokuncintisana futhi kukusize uhlukanise ibhizinisi noma umkhiqizo wakho.
Ukuqapha kungakusiza ekuboneni abaholi namasayithi abanegunya nomthelela embonini yakho.
Ukuqapha kungakusiza ekutholeni imicimbi efanelekile ongabamba iqhaza kuyo (ukuya noma ukukhuluma).
Vele, ukuqapha kuzokusiza ekutholeni ukubalulwa kwebhizinisi lakho ukuze uhlole imizwa, ukhuthaze ubufakazi bamakhasimende / okushiwo.
Ukuqapha kuzokusiza ukukhomba izingqinamba zesevisi yamakhasimende okufanele uzixazulule esidlangalaleni - noma kukunikeze ngolwazi oludingayo ukuze uthuthukise imikhiqizo noma insiza yakho.
Futhi ukuqapha kuzokunikeza ngamathuba wokungeza inani ezingxoxweni.
DK New Media yethule eyayo iSocial Media Monitoring service yamakhasimende ayo njenge-value-add ebudlelwaneni bethu obukhona. Uma unentshisekelo yokukunikeza i-test-drive, ngicela ungazise. Sizonikezela ngale nsizakalo ngama- $ 499 ngonyaka ngenkampani ngayinye (kufika ku-5 logins) okungewona amakhasimende ethu.
Ngibe nenkinga yokuthola abawinile ngo- $ 10,000 wethu wokupha… kubonakala sengathi abantu bamatasa kakhulu bafunda ama-imeyili ukuze bawaphendule! Ngakho-ke - sizokwenza izinto ezihlukile ukuhlinzeka ngamathuluzi ethu! IVontoo iyi- insizakalo yemiyalezo yezwi lokho kuzokuvumela ukuthi urekhode ngokuzenzekelayo futhi uthumele izikhumbuzo, izaziso zokuqoqa, kumakhasimende akho. Abantu bokuqala abayi-2 abangathola le nsizakalo ilusizo bazowina i-akhawunti yezokumaketha ngezwi yobuchwepheshe !!! Phendula kule imeyili nge-Vontoo! esihlokweni bese usitshela ukuthi uzosisebenzisa kanjani isicelo - sizovumela abantu baseVontoo bakhethe abawinile.